Xildhibaan Odawaa oo sheegay in Madaxweyne Farmaajo uu ku guul-dareystay saddex arrimood oo muhiim ah – Kalfadhi
August 20, 2020 August 20, 2020 Hassan Istiila
Xildhibaan Cabdiraxmaan Xuseen Maxamed Odawaa oo ka tirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, ayaa sheegay in Madaxweyne Farmaajo uusan hal maalin qadarin Baarlamaanka, uusana hal jeer qadarin ula soo noqon Baarlamaanka.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbad u jeedinayay Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Somaliya, ayaa sheegay waxyaabaha kasoo baxa shirka Dhuusamareeb uu dib ugu soo celin doono Golaha Shacabka.
Cabdiraxmaan Xuseen Maxamed Odawaa, ayaa sidoo kale sheegay in madaxweynaha laga sugayay sidii loo doortay saddex arrimood oo ay kamid yihiin dhammeystirka Dastuurka, sameynta ciidamo isku dhaf ah sidii kasoo baxday shirkii London iyo qabashada Doorasho Qof iyo Cod ah.
Xildhibaanka ayaa sheegay in Madaxweynaha uu ku guul-dareystay saddexdaasi qodob oo uu sheegay in ay dalka muhiim u yihiin.
Madaxweynaha ayaa sheegay in isagoo ka duulaya hadalkii uu ka sheegay geba-gabadii shirkii bishii hore ee Luulyo lagu soo gunaanaday Magaalada Dhuusamareeb (Dhuusamareeb 2), ee ahaa in halkaasi wixii uu kula kulmo uu dib ugu celin doono Golaha Shacabka uu go’aansaday inuu horyimaado.
“Hadalkii aan ka sheegay gunaanadkii shirkii Dhuusamareeb ee ahaa inaan dib ugu soo celiyo Golaha Shacabka. Golaha Shacabka oo ah aasaaska nidaamka dowladnimadeena. Golaha Shacabka waa hay’adda ugu sareysa ee metelaadda shacabka Soomaaliyeed, oo shan iyo toban milyan ah, oo aad tihiin midnimadii shacabka Soomaaliyeed, go’aanada aad gaartaana maaha waxaad ku gaarteen shakhsiyaad waxaad rabtaan iyo Magaalada Muqdisho aad joogtaan. Go’aanadaan gaarteen waxaad ku gaarteen rabitaanka dadkaad meteshaan.” Ayuu yiri Madaxweynuhu.
Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee Aqalka Sare oo dhagax dhiggay dhismayaal Dugsiyo Sare